दलान नेपाल : 2016
तमलोपाद्धारा नवौ बार्षीकोत्सको उपलक्ष्यमा संकल्प दिवस
at 11:49 PM Posted by Dalan
आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको एक घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, तमलोपाले आफनो नवौ बार्षीकोत्सव मनाएको छ । पार्टी आन्दोलनमा रहेको भन्दै गत बर्ष झै यस बर्ष पनि तमलोपाले यस अवसरमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगरी पार्टीका केन्द्रिय द्खि स्थानिय तहलाई संकल्प दिवसको रुपमा मनाएको छ । तमलोपाका प्रवक्ता विमल श्रीवास्तवका अनुसार केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सहितका नेताहरु काठमाडौ स्थित पार्टी कार्यलयमा संकल्प लिएका छन भन्ने जिल्ला जिल्लामा स्थानिय पार्टी कमिटीहरुले कार्यक्रम गरेर जिल्लाका नेताहरुले समेत सकंल्प लिएका छन ।
सतारुढ दलद्धारा मधेशी मोर्चा सामु निर्वाचनको प्रस्ताव
at 8:11 PM Posted by Dalan
सतारुढ घटकहरु नेपाली काग्रेस र माओवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा मधेशी मोर्चा सामु स्थानिय निकायको निर्वाचनमा जानका लागी सहमती दिन प्रस्ताव गरेका छन । मंगलवार प्रधानमन्त्री निवासमा भएको मधेशी मोर्चा र काग्रेस माओवादीको संयुक्त बैठकमा प्रमुख दुई घटकले यस्तो प्रस्ताव राखेको मोर्चाले जनाएको छ । बैकमा सहभागी तमसपाका नेता राम नरेश रायका अनुसार काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुवैले निर्वाचनमा जानका लागी मोर्चासंग सहमती खोजेको थियो ।
चिनको मधेश चासो
at 10:16 PM Posted by Dalan
भू–राजनीतिक उतारचढावका कारण पछिल्ला केही वर्षमा मधेशमा उत्तरी छिमेकी चीनको पनि चासो बढ्दै गएको छ ।
गत वर्ष नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै मधेशवादी दलहरू आन्दोलनमा रहँदा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) अन्तर्राष्ट्रिय विभागका सहायक मन्त्री डोउ यिनयोङ नेतृत्वको पा“च सदस्यीय टोली काठमाडौं आयो । विभिन्न राजनीतिक शक्तिका अलावा मधेश केन्द्रित दलका नेतास“ग पनि भेट्ने चाहना राख्यो । काठमाडौंमा भएको भेटमा मधेशी नेताहरूसग संघीयताबारे गहिरो चासो राख्नुका साथै मधेश केन्द्रित दलहरूबारे पनि जिज्ञासा राखे चिनिया नेताले ।
प्रमुख दलहरू संविधान जारी गर्ने दिशामा बढेपछि मधेश केन्द्रित दलहरूले भारतसग जोडिएका नाकामा धर्ना थालेका थिए । काठमाडौं र पहाडलाई निशाना बनाएर ती धर्ना भएका थिए, जसले मधेशी दल र भारतप्रति तीव्र आक्रोस पैदा भएको थियो । मधेशी दलका कार्यकर्ताले अझ अगाडि बढेर तराईका मुख्य सहरहरूमा चीनको झण्डा नै जलाउन थाले । पहाडमा ‘ब्याक अफ इन्डिया’नारा लाग्दै गर्दा तराईमा ‘गो ब्याक चाइना’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर चीन विरोधी प्रदर्शनसमेत भए । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासग त्यसबारे लिखित जानकारी मात्र मागेन, शीर्ष नेताहरूसग छलफल नै गर्न खोज्यो ।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निघि भन्छन- संशोधन प्रस्तावमा मधेशी मोर्चा सहमत छ ।
at 12:59 AM Posted by Dalan
सदनमा दर्ता भएको सविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु चलीरहदा सरकारका गृहमन्त्री तथा काग्रेसका नेता विमलेन्द्र निघिले हालको संशोधन प्रस्ताव प्रति मधेशी मोर्चा सहमत रहेको बताएको छ । शनिवार दलानसंग कुरा गर्दै मन्त्री निघिले सरकारले सदनमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव मधेशी मोर्चाले स्विकार गरेको दावी गरे । यद्यपी अहिले सम्म मोर्चाले औपचारिक रुपमा त्यसतो कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । दुइ दिन अगाडी मात्रै मधेशी मोर्चा सहितको संघिय गठवन्धनको बैठकले सरकारले संशोधन परिमार्जन गरेमा आफुहरुले त्यसलाई सघाउने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
यस अघि मधेशी मोर्चाको बैठकले समेत यथास्थितीमा सरकारको संशोधन प्रस्ताव मान्न नसकिने निर्णय गरेको थियो । मधेशी मोर्चा संगको अनौपचारिक संवादमा सामेल गृहमन्त्री निघिले दलानसंग गरेको कुराकानीको क्रममा आफुहरुले हालको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु पुर्व नै मधेशी मोर्चाले देखाएको समेत खुलाए । यो संशोधन प्रस्ताव मोर्चाकै सहमतीमा आएको छ, निघिले भने, यसलाई उहाहरुले अस्विकार गर्न मिल्दैनन ।
संघिय गठवन्धनले वृहत अन्तक्रियाहरु गर्ने ।
at 5:27 AM Posted by Dalan
मधेशी मोर्चा सहितको संघिय गठवन्धनले संघियताको सवालमा काठमाडौ सहित राज्य पुर्नसंचना आयोगले सिफरिसग गरेको १० ओटै प्रदेशमा अन्तक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ । विहिवार बसेको गठवन्धन बैठकले एक हप्ता भित्र काठमाडौमा र त्यस पछि १० ओटै प्रदेशमा अन्तक्रिया गरेर आन्दोलनको माहौल बनाउने निर्णय गरिएको वैठक पछि गठवन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले निकालेको विज्ञिप्तमा उल्लेख गरिएको छ ।
फोरम नेपाल भित्र फेरी खटपट
at 12:04 AM Posted by Dalan
संघिय समाजवादी फोरम नेपाल भित्र फेरी विवाद चुलिएको छ । सभासद तथा पार्टीको उपमहासचिव अभिषेक प्रताप शाहले मधेशको पछिल्लो अवस्था वारेमा फेसबुकमा गरेको टिप्पणीले फोरम भित्र चुलिएको मतभेदले सतह नै वनाउन लागेको देखिन्छ । शाहले गरेको टिप्पणी प्रति पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असन्तुष्टी राख्दै शाहसंग स्पटीकरण सोधे पछि शाहले त्यसलाइ दुर्भाग्यपुर्ण भनेर टिप्पणी गरेका छन ।
सतारुढ गठवन्धन र मधेशी मोर्चा विच छलफल
at 11:31 PM Posted by Dalan
सतारुढ गठवन्धनमा आबद्ध माओवादी र नेपाली काग्रेसका शिर्ष नेताहरुले शनिवार मधेशी मोर्चा संग छलफल गरेका छन । पछिल्लो समयमा सतारुढ गठवन्धन प्रति मोर्चा असन्तुष्टि जनाए पछि सतारुढ गठवन्धनले मोर्चा संग छलफल गरेको हो । शुक्रवार मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संग भेटेर पछिल्लो राजनितीक घटनाक्रम प्रति चासा्ेहरु राखेका थिए ।
मोर्चा र प्रधानमन्त्री बिच भेटघाट ।
at 5:16 AM Posted by Dalan
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीसंग रुष्ट रहेको मधेशी मोर्चाले शुक्रवार साझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संग छलफल गरेका छन । गत मंगलवार प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताहरुको विचमा भएको बैठक पश्चात आएको समाचारहरुले आन्दोलनरत पक्षहरु रुष्ट देखिएका छन । प्रधानमन्त्री संग यस विषयमा छलफल गर्ने जिम्मा तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई अनौपचारिक रुपमा मोर्चाका नेताहरुले छलफल गरेर दिएका थिए । वुधवार मोर्चाका नेताहरु अनौपचारिक छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्ने निचोड निकालेका थिए । मोर्चा सतारुढ नेताहरु प्रति रुष्ट बनेको समाचार आए लगत्तै विहिवार नयां शक्तिका संयोजक बाबुराम भटराईले मोर्चाका नेताहरु संग यस वारेमा समेत छलफल गरेका थिए । हिजो विहिवार भएको दुवै पक्षको छलफल पश्चात अव सहकार्य गरेर अघि वढने सहमती गरेका थिए । त्यही सहमती अनुसार शुक्रवार साझ प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्न जादा तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले नयां शक्तिका संयोजक भटराईलाई समेत आफना साथमा लगेका छन ।
मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्ने ।
at 4:49 AM Posted by Dalan
प्रमुख तीन दलले पुरानै संरचना अनुसार स्थानिय निकायको निर्वाचन आउदो बैशाखमा गर्ने अनौपचारिक निर्णय गरेका वारेमा मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मगलवार प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताहरुको बैठक वारेमा आएको विभिन्न समाचारहरु प्रति मोर्चाका शिर्ष नेताहरुले आफनो ध्यानाकर्षण भएको बताउदै पहिला सरकारसंग यसवारेमा कुरा गरेर मात्रै अगाडीको कदम चाल्ने बताएका छन । वुधवार तराई मधेश लोकतान्त्रिक पाटीको कार्यलयमा भएको मोर्चाका केहि नेताहरुको अनौपचारिक छलफलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संग एक दुइ दिन भित्रै यसवारेमा कुराकानी गर्ने निचोड निकालेका छन ।
मधेशी मोर्चाको रणनिती - एमालेलाई थप अलग्याउने
at 2:17 AM Posted by Dalan
१९ मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि खनिए । त्यसलगत्तै ओलीले बैठकस्थल छाडे । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि ओलीको सार्वजनिक आलोचना गरे । त्यसयता दाहालको निरन्तर तारो बन्दै आएका छन् ओली । मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि त कांग्रेस, माओवादी र एमालेबीच दूरी बढेको मात्र होइन, मुठभेडकै दिशामा अगाडि बढेको छ ।
‘सहिद’ को सौदाबाजी
at 12:51 AM Posted by Dalan
माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले १९ साउन, ०७३ मा मधेशी मोर्चासँग तीन बुदे सहमति गयोे । संविधान संशोधन, आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई ‘सहिद’ घोषणा र क्षतिपूर्ति, पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा फिर्ता, घाइतेहरूको उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाउने । यी सहमतिमध्ये संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउदा त्यसले राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र पारेको छ भने बाकी सहमति कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा छ ।
‘सरकारले घाइतेहरूको उपचारका लागि रकम दिने कुरा त ग¥योे तर दिइसकेको छैन’, संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘प्रक्रिया अघि बढेको भने पनि सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र अलपत्र छ ।’
संशोधन प्रस्ताव प्रति मोर्चाको साकारात्मक संकेत
at 7:25 PM Posted by Dalan
सरकारले सदनमा दर्ता गराएको सविधान संशोधन प्रस्तावलाई यथासिथतीमा नमान्ने निर्णय गरेको मधेशी मोर्चाले संवाद मार्पत परिमार्जन गरे आफुहरु त्यसलाई सघाउन तयार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । शनिवार तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसको मोर्चाको बैठकले संशोधन प्रस्ताव प्रति साकारात्मक धारणा बनाउदै हाल एमालेले गरिरहेको आन्द्योलन र थारुहरुले गरीरहेको आन्दोलनको समिकक्षा समेत गरेका थिए । फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवका अनुसार सतारुढ दलहरुले दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव आपसी समझदारीमा छलफल र सहमतीमा परिमार्जन गर्न तयार मोर्चाले त्यसलाई सघाउने निर्णय गरेको छ । यसको साथै एमालेले ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने निर्णयको विरुद्धमा गरिरहेको आन्द्योलनलाई सम्प्रदायिक सोचका साथ चालिएको कदम भएको ठहर गरेको छ । साथै पश्चिममा कैलाली र कन्चनरपुरका लागी थारु हरुले गरिरहेको आन्दोलन प्रति मोर्चाले समर्थन समेत जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारी जिवनाथ चौधरीको अर्को करामत
at 7:13 PM Posted by Dalan
विशेष अदालतद्धारा भ्रष्टाचारी ठहर भईसकेका जनकपुरका नामुद डन जिविसकै अनुदानमा चल्ने एउटा संस्थाको अध्यक्षको हैसियतामा अर्को हप्ता जनकपुरमा साहित्यक सम्मेलनको आयोजन गर्दै छ । एक बर्ष अघि नै विशेष अदालतले चौधरी जिल्ला विकास समिती धनुषाको रकम भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । तर चौधरी जिविस धनुषाकै अनुदानवाट चल्ने मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष पछिल्लो समयमा छन । चौधरी जिविसका पुर्व सहलेखापाल हुन । उनी भ्रष्टाचारमा मुछिए पछि उनको पद निलम्बनमा परेको थियो ।
जनकपुरमा नामुद डनका रुपमा परिचित चौधरी अनेकन हिसांत्मक घटनाहरुमा समेत मुछिएका हुन । चौधरी जिविसमै हुदा त्यस क्षेत्रका साहित्यकार र संचारकर्मीहरुलाई प्रभावित पार्ने गरी मैथली विकास कोषको स्थापन गरेका थिए । जसले त्यस क्षेत्रका नाम चलेका साहित्यकारहरुको कृतिहरु मुख्यत प्रकाशित गर्ने गर्थे । उनको स्थापनामा भुमिका रहेकाले नै होला त्यस संस्थावाट नाम चलेका साहित्यकारहरुको पुस्तक विमोचन हुदा चौधरी विशिष्ट अतिथीको रुपमा सधै मन्चमा देखिने गर्थे ।
मधेशी नेतामा मनभेद
at 2:50 AM Posted by Dalan
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबीच बोलचाल छैन । कम्तीमा नौ महिनादेखि यी दुई नेता एकआपसमा बोल्दैनन् । मोर्चाको बैठक, सार्वजनिक अरू कार्यक्रमहरू वा सरकारसँगको वार्तामा पनि यी दुई सँगै देखिन्छन् । तर दुईबीच औपचारिक कुराकानी हुदैन । कुरै नहुने अवस्था त्यो बखतदेखि सुरु भयो, जुनबेला महतोलाई स्पष्टीकरण सोधियो र सचेत गराइयो । सचेत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गराएको थियो । सन्दर्भ, २०७२ माघ अन्तिम साताको हो ।
भर्खरै भारतले लगाएको ६ महिने नाकाबन्दी केही खुकुलो हँुदै थियो । मोर्चाले बन्द, हड्ताल फिर्ता लिए पनि आन्दोलनको स्वरूपमा परिवर्तन गर्दै थियो । अन्य नाका सुचारु भए पनि वीरगन्ज नाका खुलेको थिएन । वीरगन्ज नाकाको आन्दोलनका इन्चार्ज महतो थिए । स्थानीय व्यापारीहरूले अरु नाका खुलेको अवस्थामा वीरगन्ज मात्रै किन बन्द भनेर उनीमाथि दबाब दिंदै थिए । त्यसैबीच बिराटनगर पुगेका महतोले मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै भने ‘खोल्ने भए सबै नाका खोलौं । वीरगन्ज मात्रै किन बन्द गर्ने ?’
महतोको उक्त भनाई आएको भोलिपल्टै वीरगन्ज सुचारु हुन थाल्यो । मोर्चाले औपचारिक निर्णय नगर्दै वीरगन्ज पनि सुचारु हुन थालेपछि नेताहरू महतोसँग खनिए । आधिकारिक निर्णय नभई किन बोलेको ? भनेर उनीमाथि प्रश्न मात्रै सोधिएन, ‘अब उप्रान्त आन्दोलन विरोधी गतिविधि नहोस्’ भनेर लिखित चेतावनी नै दिए । पत्रैबाट चेतावनी दिने कुरामा उपेन्द्रको भूमिका बढी थियो ।
एमालेलाई प्रतिकार गर्ने निर्णयहरु मधेशमा धमाधम हुदै ।
at 7:05 PM Posted by Dalan
गत शनिवार कपिलवस्तूमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पुतला जलाउदै मधेशीहरु ।
सविधान संशोधनको विरुद्धमा प्रमुख विपक्षी एमाले पश्चिमका भैरहवा, वुटवल सहित अन्य पहाडी भेगमा आन्द्योलन गरीरहदा तराई मधेशका जिल्लाहरुमा एमाले विरुद्ध धमाधम निर्णयहरु हुदै छन । शनिवार कपिलवस्तूको तैलिवहामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पुतला मधेशी पार्टीहरुमा सम्बद्ध स्थानिय नेता कार्यकर्ताहरुले जलाएका थिए । आइतवार भैरहवामा मधेशी मोर्चाको जिल्ला समितीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर एमालेले गरिरहेको आन्दोलनको प्रतिकामा उत्रने चेतावनी दिएका छन । शनिवार नै पर्साको विरगंजमा बसेको स्थानिय मधेशी मोर्चाको बैठकले पर्सा जिल्लामा एमालेलाई कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नदिने भन्दै निघेष गर्ने घोषणा गरेका छन । त्यसैगरी आइतवार सप्तरीमा पनि मधेशी मोर्चाको जिल्ला समितीको बैठकले एमाले विरुद्ध प्रतिकारमा उत्रने निर्णय गरेको मोर्चाका स्थानिय नेताहरु बताउछन ।
संशोधनको सकसमा मधेशी पार्टीहरु ।
गत मंगलवार सरकारले संसदमा संविद्यान संशोधनको लागी विद्येयक दर्ता गराए पछि मधेशी मोर्चाले औपचारिक रुपमा अस्विकार गर्ने निर्णय गर्यो । मधेशी मोर्चाको गएको बुधवार भएको बैठकले आफुहरु संगको विना सहमतीमा ल्याएको संशोधन विद्येयकले समस्या सामाधान नगर्ने भन्दै यथास्थितीमा स्विकार गर्न नसकिने निर्णय गरे । वुधवार मोर्चाको बैठक बस्नु पुर्व नै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एक विज्ञप्ति जारी सरकारले मंगलवार सदनमा दर्ता गराएको संशोधन विद्येयक नमान्ने स्पष्ट पारेका थिए । माओवादी काग्रेस गठवन्धनको तर्फवाट गएको १९ साउनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा मधेशी मोर्चा संग तीन बुदे सहमती गर्दै सविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेका थिए । त्यस यता सतारुढ गठवन्धन र मोर्चाका नेताहरुविच कयौ चरणमा संशोधन वारेमा छलफलहरु चलेका थिए । यद्यपी पछिल्लो समयमा मधेशी पार्टीहरु रुष्ट हुदै आन्दोलनको चेतावनी दिन थालेका थिए । २९ कार्तिकमा मोर्चा सहितको गठवन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई १५ दिने अल्टीमेटन नै दिन पुगे ।
सरकारलाई अझै झकझक्याउछौ - उपेन्द्र यादव
at 12:29 AM Posted by Dalan
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा खेरी सतारुढ गठवन्धनको तर्फवाट काग्रेस माओवादीले मधेशी मोर्चा संग ३ बुदे सहमती गरे । संविधान संशोधन सहितको ३ बुदे कार्यन्वयनमा नआउदा आन्दोलनरत पक्षहरु असन्तुष्टि मात्रै होईन कि पछिल्लो समयमा सरकारलाई १५ दिने अल्टीमेटन नै दिए । सरकारलाई दिएको १५ दिने अल्टीमेटन मंगवार सकिदै छ । सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने छाटकाट देखाएका छैन । त्यो भए अव के गर्छन आन्दोलनरत पार्टीहरु । संघिय गठवन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव संग दलानले गरेको कुराकानी ।
सरकारलाई दिएको अल्टीमेटन त आज सकिदै छ , अव के गर्नु हुन्छ ?
- पहिला त आज सम्मको गतिविधी हेर्छु । त्यस पछि एकचोटी फेरी सरकारलाई हामीले झकझक्याउछौ । त्यस पछि हामी सवै मोर्चा र गठवन्धन बसेर एउटा निर्णयमा पुग्ने छौ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने पछि भएका् अनौपचारिक संवाद तपाई पनि सहभागी हुनु भएको हो । खास किन कुरा ब्रिग्यो ?
- कुरा ब्रिग्नुको कारण चाही एमाले र काग्रेस पार्टीले संशोधन नचाहेर हो । काग्रेस संशोधनका् मामलामा अस्पष्ट छ । एमाले विरोध मै अभियान चलाइरहेका छन । अनि माओवादी संग संख्या नै छैनन । माओवादी वा प्रचण्डले चाहदैमा पनि संशोधन हुने अवस्था आएनन । कुरा चाही याहा आएर अडकेको मेरो वुझाई छ ।
संघिय गठवन्धनको बैठक सुरु ।
आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा सहितको संघिय गठवन्धनको बैठक सोमवार देखि सुरु भएको छ । मंगलवार गठवन्धनले सरकारलाई दिएको १५ दिने अल्टीमेटनको समयसीमा सक्ने भए पछि सोमवार देखि गठवन्धनको बैठक सुरु भएको छ । सोमवार बसेको गठवन्धन बैठकले पछिल्लो राजनितीक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै आन्दोलनमा जाने निष्कर्ष निकालेको फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले वताए ।
सतारुढ गठवन्धन र आन्दोलनरत पार्टीहरु विच छलफल ।
at 4:04 AM Posted by Dalan
सतारुढ गठवन्धन र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा सहितको संघिय गठवन्धन विच वुधवार छलफल भएको छ । सतारुढ गठवन्धनको तर्फवाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको औपचारिक बैठकमा सरकारद्धारा संसदमा दर्ता गराउने भनिएको संविधान संशोधन विदैयक वारेमा छलफल भएको थियो । पछिल्लो समयमा स.व्द्यिान संशोधनका लागी आन्द्योलनरत घटकहरुले सरकारलाई १५ दिने अल्टीमेटन दिएका थिए । उक्त अल्टीमेटनको समय आउदो हप्ता सकिदै छ । यता सत्तारुढ गठवन्धनले सवै दलहरु संग संवाद गरेर आफुहरुले चाडै संशोधन दर्ता गराउने आश्वासन मोर्चालाई दिदै आएका थिए । तर गएको सोमवार प्रमुख तीनदलको बैठकमा नेकपा एमालेले आफुहरु संशोधनको पक्षमा जान नसक्ने र संशोधन हुन पनि नदिने वताए पनि राजनिती मुठभेड उन्मुख बनेको छ ।
शान्ति सम्झौतापछि अशान्त मधेश
at 9:10 PM Posted by Dalan
सरकार र तत्कालिन विद्रोही माओवादीवीच वृहत शान्ति सम्झौता भएपछिका दश वर्ष तराई मधेश अशान्त भयो ।
२०६३ मंसीर ५ गते विद्राही माओवादीलाई औपचारिक रुपमा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउदै गर्दा तराई–मधेशमा भित्रभित्रै असन्तुष्टीको आगो दन्कदै थियो । त्यो समय मधेशको मुलधारमा सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीको वर्चश्व थियो । शान्ति प्रक्रियासंगै अन्तरिम संविधान निर्माण प्रक्रिया बढेको थियो । जसप्रति सद्भावना असन्तुष्ट देखिन्थ्यो । अन्तरिम संविधानको खाकाप्रति उसले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेको थियो ।
‘प्रमुख दलहरुले माओवादी वाहेक अरुका मागहरुलाई वेवास्ता गरेका कारण असहमति जनाउनुपर्ने अवस्था आयो’, तत्कालीन सद्भावना आनन्दीदेवीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरतविमल यादव भन्छन्–‘मधेशलाई प्राथामिकतामा नराखेको प्रतिफल यो दश वर्षमा मधेशको असन्तुष्टी चुलीमा पुग्यो । अनेक गतिविधि पनि मौलाए ।’
मधेशमा पत्रिका किन जल्छन् ?
at 8:38 PM Posted by Dalan
मधेश राज्यसँग जति असन्तुष्ट छ, राजधानी केन्द्रित ठूला मिडियासँग त्यति नै आक्रोशित हुन्छ । त्यो आक्रोश उनीहरू बेलाबखत पत्रिका जलाइदिएर पोख्छन् । आन्दोलनका बेलामा त मधेश झन् उग्र हुन्छ । गतवर्षको मधेश आन्दोलन चर्कदा आन्दोलनकारीहरूले प्रमुख मिडिया हाउसका दैनिक, साप्ताहिक पत्रिकाहरू आन्दोलनको मुख्य प्रभाव क्षेत्रमा पु¥याउन दिएनन् । मिडिया हाउसका गाडी, तोडफोड गरेर पत्रिका जलाउने काम गरे । त्यो बखत सुनसरीदेखि सर्लाहीसम्म राजधानी केन्द्रित प्रमुख पत्रिकामाथि बन्देज नै लाग्यो । आखिर किन जलाइन्छन् पत्रिका ? यसमा सायद थप विमर्श आवश्यक छ ।
नेपाली काग्रेस र मधेशी पार्टीहरु बिच छलफल
आन्दोलनरत मधेशी पार्टीहरु र नेपाली काग्रेस विच वुधवार छलफल भएको छ । बुधवार साझ काग्रेसको संसदीय दलमा भएको छलफलमा मधेशी मोर्चा सहितको संघिय गठवन्धनमा आबद्ध दलहरु सहभागी भएका थिए । पछिल्लो समयमा तीन बुदे सहमती कार्यन्वयनमा नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका आन्दोलनरत दलका नेताहरुले संविद्यान संशोधनका लागी काग्रेसलाई गम्भिर बन्न आग्रह गरेका थिए । वुधवारको छलफलमा सहभागी तमलोपाका महनमन्त्री जंगीलाल यादवका अनुसार काग्रेसले गठवन्धनको १५ दिने अल्टमिटेनको समयसिमा भित्रै संशोद्यन विद्येयक संसदमा दर्ता गराउने आश्वासन दिएका थिए ।
मधेश आन्दोलनमा लगाइएको मुद्धाहरु फिर्ता गर्ने गृहकार्य
at 8:06 PM Posted by Dalan
मंगलवार नेताहरु लक्ष्मणलाल कर्ण र लालबाबु राउतले गृहमन्त्रालयवाट पुन आएको मुद्धा फिर्ता सम्बन्धी कागजातहरु हेर्दै ।
आन्दोलनरत सघिय गठवन्धनले १५ दिने अल्टीमेटन दिए लगत्तै सरकारी पक्षले मन्त्रीपरिषद वाट हुने भनिएको मुद्धा फिर्ताको गृहकार्यमा तीव्रता दिएको छ । आन्दोलनरत पक्षहरुले सरकारकै तर्फवाट हुने कामहरु समेत नभएको भन्दै पछिल्लो समयमा तीव्र असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । जुन गठवन्धनले सोमवार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको ज्ञापन पत्रमा समेत उल्लेख गरिएको थियो । सोमवार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको केहि वेरमै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निघिले गृहमन्त्रालयमा मुद्धा फिर्ताका लागी गृहकार्य गर्ने जिम्मा दिएका अधिकारीहरु संग छलफल गरेका थिए । त्यस पछि उक्त अधिकारीहरुले तयार पारेको साम्रगी हेरी दिनका लागी र त्यसमा थप सुझाव दिनका लागी मंगलवार उनले मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण लाई पठाएका छन । मोर्चाले त्यसलाई हेरेर थप सुझाव सहित पठाए पछि मात्रै मुद्धा फिर्ताको प्रक्रिया अघि वढने वताइन्छ ।
संविधान संशोधनको चक्रव्युह
at 8:47 PM Posted by Dalan
सत्ता गठबन्धन, मधेशी मोर्चा र प्रमुख विपक्षी एमालेको अलग–अलग रणनीतिका कारण संविधान संशोधनले नेपाली राजनीतिको चक्रव्युहको रूप लिएको छ ।
१४ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेतासग मसान्तभित्र संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने चौथो पटक प्रतिबद्धता गरे । २१ असोजमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् अंगिकृत नागरिकलाई राज्यका उपल्लो तहमा पुग्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी संविधानमा संशोधन हुन लागेको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि त नेपाली राजनीति नै तरंगित बनेको छ । भलै, सत्ता पक्ष र मोर्चाले त्यसको खण्डन गरेका छन् ।
संघिय गठवन्धनद्धारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण ।
at 6:32 PM Posted by Dalan
आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा सहितको संघिय गठवन्धनले वर्तमान सरकार बन्दा खेरी गरिएको तीन वुदे सहमती कार्यन्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाइ भेटेर गठवन्धनका तर्फवाट फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लिखित रुपमा दुई पेजको स्मरण पत्र बुझाएका छन । गठवन्धनले सोमवार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको स्मरण पत्रमा आउदो १५ दिन भित्र तीन वुदे सहमती अनुरुप संविद्यान संशोधनको प्रक्रिया अघि वढाएमा गठवन्धन पुन आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइएको छ ।
छठ पर्वको हार्दिक शुभकामना ।
at 10:57 PM Posted by Dalan
तराई मधेशको महान पर्व छठ आज देखि सुरु भएको छ । यस अवसरमा हामी हाम्रा सवै पाठक तथा शुभचिन्तकहरुमा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । दलान नेपाल परिवार.....
तमलोपाले क्षेत्रिय स्तरमा राजनितीक प्रशिक्षण गर्दै ।
at 6:25 AM Posted by Dalan
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले मधेशमा आउदो १ मंसीर देखि क्षेत्रिय स्तरमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु गर्दै छन । सत्तारुढ पक्षले ३ बुदे सहमती अनुसार मधेशको मुद्धा सम्बोधन हुने गरी संविद्यान संशोधन नगरीरहेको भन्दै तमलोपाले स्थानिय तहमा आफना नेताहरुलाई त्यसको वारेमा जानकारी दिने र अगामी दिनमा पुन आन्दोलनका लागी कसरी उत्रने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्न लागेको जनाएको छ । तमलोपाका महामन्त्री वृजेश गुप्ताका अनुसार तमलोपाका केन्द्रिय नेताहरु दिने यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रम पहिलो चरणमा मधेश आन्द्योलनमा वढी प्रभावित जिल्लाहरु सप्तरी देखि बाके सम्म हुन लागेको छ ।
लोकमान वारेमा सघिय गठवन्धनद्धारा तत्काल कुनै निर्णय नलिइने ।
at 7:14 AM Posted by Dalan
स्थानिय निकाय पुर्नसंरचना आयोगको रिर्पोट नमान्ने, ३ बुदे सहमती प्रति सरकार उदासिन रहेको ठहर ।
आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा सहितको संघिय गठवन्धनले अख्तीयार आयोग प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग वारेमा तत्काल कुनै निर्णय नलिने निष्कर्ष निकालेको छ । विहिवार बसेको संघिय गठवन्धनको बैठकले कार्की विरुद्धको महाअभियोग दर्ता हुदा प्रमुख दलहरुले मधेशी पार्टीहरु संग कुनै छलफल नगरेकाले तत्कालै कुनै निर्णयमा नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी रामसपाका नेता केशव झाले बताए । गठवन्धनले महाअभियोग समितीले लिने निर्णय पश्चत आफनो पोजिसन स्पष्ट पार्ने समेत बैठकले निचोड निकालेको झाले बताए ।
सत्तारुढ गठवन्धन प्रति मधेशी मोर्चा सशंकित ।
at 6:57 AM Posted by Dalan
माओवादी र काग्रेसको नयां सत्ता गठवन्धनले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा संग गरेको वाचा अनुसार संविद्यान संशोधन हुन नसकिरहेको प्रति सशंकित हुन थालेका छन । प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ गठवन्धनका कतिपय नेताहरुले सरकार संशोधनको तयारीमा अघि वढीरहेको बताइरहदा मोर्चाका नेताहरु भन्ने आफुहरु यस वारेमा पुरै वेखवर रहेको बताउछन । अघिल्लो हप्ता प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गर्दै सरकार सशोधनको अन्तिम तयारीमा लागीपरेको बताएका थिए । तर मधेशी मोर्चाका नेताहरुले प्रचण्डको भनाईमा कुनै सत्यतता नभएको जिकिर गर्छन । प्रचण्डले संशोधनका लागी सवै पक्षहरु संग अनौपचारिक तहमा संवाद समेत भईरहेको दावी गरेका थिए । तर मोर्चा सम्बद्ध स्रोतका अनुसार दशै पछि प्रचण्ड र मधेशी नेताहरुविच कुनै अनौपचारिक छलफल भएको छैन ।
लोकमान प्रकरणमा मधेशी सासंदहरु अहिले मौन बस्ने ।
at 7:39 AM Posted by Dalan
संसदमा अख्तीयार आयोग प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध दायर भएको महाअभियोग सन्दर्भमा मधेशी पार्टीहरुका संसद अहिले मौन रहने रणनिती लिन लागेको नेताहरुले बताएको छ । आउदो मंगलवार देखि संसदमा कार्की विरुद्धको महाभियोग वारेमा छलफल सुरु हुदै छ । मधेशी पार्टीहरुका सासंदहरुले आफुहरु संग कुनै सल्लाह नै नगरीकन यो प्रक्रिया अघि वढेकाले आफुहरु यसमा मौन बस्न लागेको बताएका छन । तमलोपाका महामन्त्री तथा सांसद वृजेश गुप्ता भन्छन, अहिले नै हामी यस वारेमा कुनै पोजिसन लिने छैन । पहिला संसदको महाअभियोग समितीले कार्कीको वारेमा के निर्णय लिन्छ, त्यस पछि मात्रै हामी आफनो पोजिसन प्रष्ट गर्ने छौ, गुप्ता भन्छन ।
भारतीय 'एडभान्स टिम' जनकपुरमा ।
भारतीय राष्टपति प्रणव मुखर्जीको आसन्न नेपाल भ्रमणको क्रममा जनकपुर जाने कार्यकमको वारेमा जानकारी लिन भारतीय एडभान्स टिम शुक्रवार जनकपुर पुगेको छ । आउदो १७ कार्तिक देखि हुने भारतीय राष्टपति मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको लागी जानकारी संकलन गर्न विहिवार काठमाडौ आइपुगेको एडभान्स टिम शुक्रवार जनकपुर पुगेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु समेत सहभागी उक्त टोलीले मुखर्जीको भ्रमणको वारेमा सवै सुचना संकलन गरेर भारतीय राष्टतिलाई रिर्पोट बुझाए पछि उनको भ्रमणको औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक हुनेछ । १७ देखि १९ कार्तिक सम्मको दुई दिने नेपाल भ्रमण आउन लागेका भारतीय राष्टपति काठमाडौ वाहिर जनकपुर र लुम्बिन जाने समेत कायृक्रम रहेको छ । भारतीय राष्टपति मुखर्जी १९ कार्तिक अर्थात ४ नोभेम्बरमा जनकपुर जाने कार्यक्रम तय भएको सम्वद्ध स्रोतको दावी छ ।
वडादशैको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
at 11:07 PM Posted by Dalan
नेपालीहरुको आगंनमा महान चाड वडादशै आइपुगेको छ । यस अवसरमा याहाहरुलाई हार्दिक मंगलमय शुभकमना । दलान नेपाल परिवार....
राजेन्द्र महतोको विश्लेषण - यसपाली ओभरटेक गरेर एकिकरण गरिन्छ ।
जतीजती वेला मधेशी पार्टीहरु विचको एकिकरणको चर्चा हुन्छ । त्यती त्यती वेला आममधेशी नागरिकमा सकारात्मक संचार प्रवाह भएको देखिन्छ । मधेशका वैद्धिक क्षेत्र देखि विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय मधेशी सोध्न थाल्छन, के साच्चिकै हामा्र मधेशी नेताहरु एक हुने भए त ? यसले मधेशी पार्टीहरुको एकिकरण होस भन्ने भावना मधेशमा कत्ति वलियो छ भन्ने देखाउछन । दोस्रो संविद्यानसभाताका मधेशी नेताहरु गाउ गाउ जादा आम मधेशीले यही प्रश्न गर्ने गर्थे, मधेशका लागी तपाईहरु लडने किन एक भएर आउनु हुन्न । मधेशी पार्टीहरुको एकिकरणको सवाल पनि अव नोलौ विषय होइन । यस अघि पनि पटक पटक यो प्रयास अससफल भईसकेकाले होला अव एकिकरणको चर्चा वा कुनै प्रयास हुदा आम मधेशीहरु भन्ने गर्छन, साच्चिकै हाम्रा मधेशी पार्टीहरु एक हुन्छ त ? पछिल्लो समयमा पुन मधेशका दुई प्रमुख मधेशी पार्टीहरु विच एकिकरणको चर्चा सुरु भएको छ । पहिला पहिला यसका वारेमा धेरै वैठकहरु गरेर चर्चामा आउने चाहने नेताहरु यस पाली यो प्रक्रियालाइ अली गोप्य राख्न चाहेको देखिन्छ । पछिल्लो केहि महिना यता महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना विच एकिकरणको गृहकार्य अत्ति गोप्य तरिकाले भईरहेको आभास देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा दलानसंगको एउटा चिया गफमा आइतवार सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो यसको विभिन्न पाटाहरुवारे विश्लेषण गर्न तयार भए । सुरुमा अत्यन्तै कुरा चपाउदै कुराकनी अघि वढाएका महतोले एकिकरणको वारेमा यस अघि भएको विभिन्न प्रयासहरुको वारेमा कुरा को्टयाउदै भने, सवै लाई थाहा भएकै कुरा हो हामीहरु विचमै केहि यस्ता स्वकेन्द्रित नेताहरु भए जसका कारण अहिले पनि एकिकरणमा बाधा पुग्दै छ । तर उनले विश्लेषणको विट मारिरहदा वडो आत्मविश्वासका भन्दै थिए, तर यस पाली एकिकरण हुन्छ, हुन्छ.... । कसरी प्रतिप्रश्न गर्दा महतो अली रमाइलो पारामा भने, यस पाली अन्तमा ओभरटेक गरेर एकिकरण हुन्छ ।
तमलोपा र सदभावना एकिकरणको आन्तरिक गृहकार्य सुरु ।
लक्ष्मणलाल कर्ण र वृषेशचन्द्र लाललाई एकिकरणको खाका बनाउने जिम्मा ।
गएको असार पहिलो हप्ता तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको पहिलो महाधिवेशनको पुर्वसन्धयामा पुन चर्चामा आएको तमलोपा र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना विचको एकिकरणका लागी आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको छ । हाललाई अति गोप्य तरिकाले यी दुई ओटा पार्टीहरु विच एकिकरणको आन्तरिक कसरत उच्च तहमा चलीरहेको सम्बद्ध स्रोतको दावी छ । तमलोपाको महाधिवेशनको पुर्वसन्धयामा भएको सदभावनाको विशेष पदाधिकारी बैठकमा उक्त पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो स्यंवम आफैले तमलोपा संग एकिकरण गर्ने वारेमा छलफल भईरहेको खुलाएको थियो । त्यसको भोली पल्ट तमलोपाको नवलपरासीमा सुरु भएको महाधिवेशनको उद्धघाटन समारोहमा समेत महतोले तमलोपासंगको एकिकरणको वारेमा बोलेका थिए । तमलोपा पहिलो महाधिवेशनले पारित गरेको राजनितीक दस्तावेजमा पनि मधेश केन्द्रित पार्टीहरु संगको एकिकरणलाई विशेष महत्वका साथ उल्लेख गरिएको थियो । तमलोपा र सदभावना पार्टी सम्बद्ध स्रोतका अनुसार त्यसको केहि समय पछि नै तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महताले आन्तरिक छलफल गरेर नेताहरु लक्ष्मणलाल कर्ण र वृषेशचन्द्र लाललाई एकिकरणको सवै पक्षहरुको विस्तृत खाका बनाउने जिम्मा तोकेका छन । दुवै पक्षले एकिकरणको सन्दर्भमा हुने तयारीलाई अति गोप्य राख्ने सहमत भएकाले यसवारेमा अधिकारिक रुपमा कसैले केहि बोलेका छैन ।
हिन्दी अभियानी मधेशी नेता रमण पाण्डे सम्मानित
विगत २६ बर्ष देखि प्रतिकात्मक रुपमा नेपाली भाषालाई वहिष्कार गर्दै हिन्दीमा मधेश केन्द्रित अभियान चलाउदै आएका मधेशी नेता रमण पाण्डे वुधवार सम्मानित भएको छ । वुधवार विरगंजमा एक हप्ते हिन्दी समागन कार्यक्रममको अन्तयमा पाण्डेलाई विरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्यदुतावका प्रमुख अन्जु रन्जन र कार्यक्रममा सहभागी हुन विरगंज आइपुगेका वरिष्ठ भारतीय साहित्यकार आलोक धन्नवाले पाण्डेलाई सम्मानीत गरेका थिए । सम्मानित पाण्डे सदभावना पार्टीसंग सुरु देखि नै आवद्ध भएर मधेश राजनिती गर्दै आइरहेका छन । मधेशीहरु संग भाषीक, सांस्कृतिक रुपमा विभेद भएको स्वरुप पाण्डे नेपाली भाषालाई विगत २६ बर्ष देखि वहिष्कार गर्दै आइरहेका छन । पाण्डे महोत्तरीका हुन ।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको घरमा चोरी गर्ने अभियोगमा दुई जना पक्राउ ।
गएको २४ भदौमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको घरवाट विफ्रकेश चोरी गरेको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । प्रहरी सोमवार उक्त घटनामा संग्लन रहेको अभियोगमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौंले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा काठमाडौं पेप्सीकोला बस्ने सर्लाही पिडाडि गाबिस–३ का २३ वर्षीय रन्जितप्रसाद गुप्ता र काठमाडौं पेप्सीकोला बस्ने महोत्तरी मेघनाथ घोरन्ना गाबिस–४ का ३२ वर्षीय ‘प्रमानन्द’ भन्ने प्रचण्डप्रताप सिंह रहेका छन् । गुप्ता ठाकुर चढने गाडीका पुर्व चालक हुन ।
संविद्यान संशोधन सहित तीन वुदेको वारेमा मोर्चाद्धारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ३ बुदे सहमतीको वारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा बन्ने वेलामा मधेशी मोर्चा संग ३ बुदे सहमती गरेका थिए । संविद्यान संशोधन सहित मधेश आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा, धाइतेहरुको उपचार खर्च र मुद्धा फिर्ताको वारेमा उक्त तीन वुदा गरिएको थियो । हिजो सोमवार मात्रै मोर्चाको बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीले आफुहरु संग गरेको सहमती अनुसार सविद्यान संशोधन अघि नवढाएको भन्दै प्रचण्डलाइ ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका थिए ।
स्थानिय निकायको वारेमा प्रमुख दलहरुले गरेको सहमती मधेशी मोर्चाले नमान्ने ।
at 7:32 AM Posted by Dalan
संविद्यान संशोधनको लागी प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले प्रमुख तीन दलहरु विच हिजो स्थानिय निकायको वारेमा भएको सहमती नमान्ने जनाएको छ । सोमवार तमलोपाको पार्टी कार्यलयमा बसेको मोर्चाको बैठकले प्रमुख तीन दलहरुले इलाकालाई आधार बनाएर स्थानिय निकाय पुनंसंरचना गर्ने गरी गरेको सहमती आफुहरु नमान्ने भन्दै संविद्यान संशोधनका लागी प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने समेत निर्णय गरेको छ । मोर्चाका एक घटक सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचनताका सतारुढ गठवन्धन संग भएको सहमती अनुसार सरकार संशोधनको प्रक्रिया अगाडी नवढाएको भन्दै मोर्चाका शिर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्रीलाई त्यस सम्बन्धीमा ध्यानाकर्षण गराउने छ । कर्णका अनुसार संविद्यान संशोधन विना प्रमुख दलहरुले स्थानिय निकायको वारेमा गरेको निर्णयलाई मोर्चाले नमान्ने निर्णय गरेको छ । कर्णले भने, प्रमुख कुरा संविद्यान संशोधन गरेर संघियतालाई व्यवस्थीत गर्ने कुरा छ । स्थानिय निकायको पुर्नसंरचनाको नाममा नागरिकको सेवा सुविद्याहरुलाइ झनै टाढा गर्ने अधिकार कसै संगै छैन । मोर्चाको अवरोधका कारण तराई मधेशका जिल्लाहरुमा स्थानिय निकाय पुनंसंरचना समितीले यस अघि काम गर्न सकेको थिएन ।
मधेश आन्दोलनमा मारिएकाहरुको सम्झनामा श्रदान्जलीसभा
गत बर्ष ६ महिना भन्दा लामो समय सम्म चलेको मधेश आन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरु प्रति आज मधेशी मोर्चा सहित संघिय गठवन्न्धनले श्रदान्जलीसभाको आयोजना गरेको छ । गठवन्धनले काठमाडौको कलंकीमा श्रदान्जली सभाको आयोजना गरेको थियो मधेशै भर मोर्चा सहित गठवन्धनले संयुक्त रुपमा श्रदान्जली सभाको आयोजना गरेको थियो ।
मधेशी मोर्चाद्धारा गृहमन्त्रीलाई थप विवरणहरु हस्तानान्तर ।
१४ सहिद सहित थप ११ जनाको मुद्धा फिर्ताको लागी मोर्चाको सिफारिस ।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकार ३ सय ७४ जनाको मुद्धा फिर्ता दशै अगाडी नै गर्ने बताएको भोली पल्ट मधेशी मोर्चाले उनलाई यस अघि बुझाएको मुद्धा फिर्ताको नामावलीमा छुटेको भन्दै थप ११ जना माथी लगाइएको मुद्धा फिर्ता हुने पर्ने विवरण बुझाएको छ । यस अघि मधेशी मोर्चाले गृहमन्त्रालयमा ४ सय ९१ जनाको मुद्धा फिर्ता हुनु पर्ने विवरण बुझाएको थियो । गृहमन्त्रालयले आन्दोलनको क्रममा ३ सय ९४ जना माथी मुद्धा लगाइएको तथ्याकं संकलन गरेको छ । गृहमन्त्री निधिले हिजो शनिवार मात्रै सरकारले दशै अगाडी आन्दोलनको क्रममा लगाइएको मुद्धाहरु फिर्ता हुने वताएको थियो । निधिले आन्दोलनको क्रममा लागेको ३ सय ७४ ओटा मुद्धा फिर्ता लिने तयारी सरकारले गरेको बताएका थिए । यस अघि मोर्चाले बुझाएको सहिद घोषणाको नामावलीमा समेत सरकारले केहिलाइ छाडदै ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । मोर्चाले आज त्यसमा समेत बाकी रहेको १६ जना मध्ये १४ जनाको विस्तृत विवरण गृहमन्त्रीलाई वुझाएको बताएको छ । यसको साथै मोर्चाले आन्दोलनको क्रममा धाइते भएकाहरुको खर्च भएको रकमको विल भर्फाइ समेत सरकारलाई दिएको छ ।
३ असोजमा मधेशी मोर्चाले काठमाडौमा पनि प्रर्दशन गर्ने ।
धाइतेको उपचार खर्च र मुद्धा फिर्ता वारेमा मोर्चाको सचिवालयले पनि छानविन गर्दै ।
सरकार तथा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले ३ असोजलाई भव्य रुपमा संविद्यान दिवस मनाउने तयारी गरिरहदा मधेशी मोर्चाले त्यस दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउदै काठमाडौमा समेत प्रर्दशन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार बसेको मोर्चाको सचिवालय बैठकले कालो दिवस तराई मधेश सहित काठमाडौ मा समेत मनाउने निर्णय गरेको छ । यस अघि मोर्चाले ३ असोजलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउदै निर्णय गर्दै २ देखि ४ असोज सम्मका लागी तराई मधेशका विभिन्न ठाउहरुमा प्रर्दशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर शुक्रवार बसेको मोर्चाको सचिवालय बैठकले तराइ मधेशको साथै काठमाडौमा समेत ३ असोजमा प्रर्दशन गर्ने निर्णय गरेको छ । सचिवालय सदस्य तथा तमलोपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालका अनुसार ३ असोजमा मोर्चाले काठमाडौको माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर प्रर्दशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा मोर्चाका नेताहरु ।
आज देखि चार दिने भारत भ्रमणमा गएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण टोलीमा आन्दोलनरत मधेशी पार्टीहरुका सासदहरु समेत सामेल छन । प्रचण्डको भ्रमण टोलीमा तमलोपाका ससद तथा उक्त पार्टीका महामन्त्री जंगीलाल राय तथा फोरम नेपालका सासंद लालबाबु राउत सहभागी भएका छन । भारत भ्रमणमा जानु अघि संविद्यान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा दर्ता नगराएको भन्दै मधेशी पार्टीहरु असन्तुष्ट देखिएको वेला मोर्चाका सांसदहरु प्रचण्डको भ्रमण टोलीमा सामेल भएका छन ।
प्रधानमन्त्री र मधेशी मोर्चा विच छलफल ।
at 8:12 AM Posted by Dalan
भोली देखि भारत भ्रमणमा गईरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वुधवार मधेशी मोर्चाका प्रतिनिधिहरु संग छलफल गरेका छन । प्रधानमन्त्रीले संविद्यान संशोधनको मस्यौदा भारत भ्रमण अघि सदनमा दर्ता गराउन नसक्दा मधेशी पार्टीहरु रुष्ट देखिएको वेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी मोर्चालाई छलफलमा डाकेका थिए । पछिल्लो समयमा सतारुढ घटक र मोर्चा विच दुरी वढेकै कारण वुधवारको छलफलमा मोर्चाको तर्फवाट शिर्ष नेताहरु सहभागी भएनन । वरु मोर्चाका घटकहरुले आफनो प्रतिनिधिलाई वालुवाटार पठाएका थिए । मोर्चाका प्रतिनिधिहरु संग प्रधानमन्त्रीले आफुहरु संविद्यान संशोधनको खाकामा सहमती जुटाउन लागी परेको भन्दै चाडै त्यसलाई मुर्त रुप दिदै सदनमा दर्ता गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । वुधवार प्रधानमन्त्री संगको छलफलमा सहभागी सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, उहाले सधै जस्तै आज पनि सवै कुरा चाडै नै टुगिने कुरा गर्नु भयो ।
प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वारे मोर्चा भित्र आन्तरिक छलफल ।
नयां सत्ता-गठवन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको समर्थन आन्दोलनरत पक्षहरुले फिर्ता लिने बताएको छ । तीन वुदे सहमती गरेर नया सत्ता गठवन्धनलाई दिएको समर्थन कसरी फिर्ता लिने वारेमा आन्दोलनरत मधेशी पार्टीहरुले आन्तरिक छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । संविद्यान संशोधनका लागी सत्तारुढ दलहरुसंग भएको अनौपचारिक वार्ताहरु असफल देखिए पछि मधेशी पार्टीहरु प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै पुन आन्दोलनमै फर्कने बताएको छ । सत्ता गठवन्धनले सरकार निर्माणको वेलामा मधेशी पार्टीहरु संग सरकार गठन भएको डेढ महिना भित्र आन्दोलनरत पक्षहरुको माग बमोजिम संविद्यान संशोधन गर्ने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सत्ता गठवन्धनहरु संविद्यान संशोधनको पक्षमा अगाडी नवढेको भन्दै मोर्चा आबद्ध मधेशी पार्टीहरुका शिर्ष नेताहरुले चाडै मोर्चाको बैठक गरेर यसवारेमा ठोस रुपमा छलफल सवै पक्ष संग गर्ने बताएको छ । एक शिर्ष मधेशी नेतृत्वको अनुसार दुई चार दिन भित्रै मोर्चाको बैठक बोलाउने गृहकार्य सोमवार देखि सुरु भएको छ । यसको साथै शिर्ष तहमा नेताहरु विच प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन कसरी फिर्ता लिने वारेमा समेत छलफलहरु सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसंग वार्ता हुन सकेनन ।
सत्तारुढ गठवन्धनको संविद्यान संशोधनको खाका प्रति असन्तुष्ट रहेको मधेशी मोर्चा र प्रधानमन्त्री विच आइतवार भनिएको बैठक हुन सकेनन । शुक्रवार साझ प्रधानमन्त्री र काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका दुई जना शिर्ष नेताहरु महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव संग छलफल गरेका थिए । शुक्रवारको बैठक पश्चात नेताहरुले आइतवार पुन बैठक गर्ने भनेका थिए । यद्यपी उक्त शिर्ष बैठक अगावै काग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि संगको भेटमा तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले आफुहरुले सत्तारुढ दलहरुले भनिरहेको अनुसारको संशोधनको पक्षमा नरहेको बताएका थिए । निधि मार्फत प्रचण्डले उक्त सुचना पाए पश्चात गएको शुक्रवार प्रचण्डले उक्त बैठक डाकेका थिए । उक्त बैठक पश्चात पुन आज आइतवार सुत्तारुढ गठवन्धन नयां प्रस्ताव लिएर आउने भनेका थिए । तर आज आइतवार दुवै पक्षको वार्ता नै हुन सकेनन । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार आज आइतवारको वार्ता उत्तै अर्थात सत्तारुढ गठवन्धनकै तर्फवाट स्थगीत भएको छ ।